2 VaKorinde 1:1-24
1 Pauro, muapostora+ waKristu Jesu nokuda kwaMwari, naTimoti+ hama yedu kuungano yaMwari iri muKorinde, pamwe chete nevatsvene+ vose vari muAkaya+ yose:
2 Mutsa usina kukodzera kuwanwa norugare zvinobva kuna Mwari Baba vedu naShe Jesu Kristu ngazvive nemi.+
3 Ngaarumbidzwe iye Mwari uye Baba+ vaShe wedu Jesu Kristu, Baba vengoni huru kwazvo+ uye Mwari wokunyaradza kwose,+
4 anotinyaradza pakutambudzika+ kwedu kwose, kuti tikwanise kunyaradza+ vaya vari pakutambudzika chero kworudzi rupi zvarwo nokunyaradza kwatiri kunyaradzwa nako naMwari.+
5 Nokuti kutambura kwatinoita nokuda kwaKristu zvakunowanda,+ saizvozvo kunyaradzwa kwatinowana kunowandawo nokuna Kristu.+
6 Zvino kana tichitambudzika, tinotambudzika kuti munyaradzwe uye kuti muponeswe;+ kana kuti kana tichinyaradzwa, tinonyaradzwa kuti imi munyaradzwe zvichiita kuti mutsungirire kutambura ikoko kuzhinji kwatinotamburawo.+
7 Naizvozvo tariro yedu ine chokuita nemi haizununguki, zvatinoziva kuti, zvamuine kutambura kuzhinji nesu, saizvozvo muchanyaradzwawo.+
8 Nokuti hama, hatidi kuti muve vasingazivi pamusoro pokutambudzika kwakatiwira muruwa rweEzhiya,+ kuti takanga takamanikidzika kwazvo zvinopfuura simba redu, zvokuti takanga tisisina kana chokwadi kunyange noupenyu hwedu.+
9 Chokwadi, takafunga mumwoyo medu kuti takanga tatongerwa rufu. Izvi zvakaitika kuti chivimbo+ chedu chive muna Mwari anomutsa vakafa,+ kwete matiri.
10 Iye akatinunura pachinhu chakakura kudai sorufu uye achatinunurazve;+ uye tariro yedu iri maari kuti acharamba achitinunura.+
11 Imiwo munogona kubatsira nokutitetererera kwenyu,+ kuti vazhinji vaonge+ vachizviitira isu nokuda kwezvatinopiwa nenzira yomutsa nokuda kweminyengetero yevanhu vazhinji.+
12 Nokuti chinhu chatinozvirumbidza nacho ndeichi, chinopupurirwa nehana yedu,+ kuti takazvibata munyika, asi kunyanya kwamuri, noutsvene nomwoyo wose kuna Mwari, kwete nouchenjeri hwenyama,+ asi nomutsa usina kukodzera kuwanwa waMwari.
13 Nokuti chokwadi hatisi kukunyorerai zvimwe zvinhu kunze kwezvamunonyatsoziva kana zvamunonzwisisa; uye zvandinotarisira kuti mucharamba muchizvinzwisisa kusvikira kumugumo,+
14 sokunzwisisawo kwamakaita, kusvikira kumwero wakati, kuti tiri chikonzero chokuti muzvirumbidze,+ sezvamuchaitawo kwatiri pazuva raShe wedu Jesu.+
15 Naizvozvo, nechivimbo ichi, ndaimboda kuuya kwamuri,+ kuti muve nenguva yokufara kechipiri,+
16 uye pashure pokugara nemi kwenguva duku ndaizoenda kuMakedhoniya,+ ndozodzoka kwamuri ndichibva kuMakedhoniya+ mozondiperekedza+ zvishoma kuJudhiya.
17 Naizvozvo, pandaida izvozvo, ndakazviona sezvinhu zvisina basa+ here? Kana kuti zvinhu zvandinoda kuita, ndinoda kuzviita maererano nenyama+ here, kuti nditi “Hungu, Hungu” uye “Aiwa, Aiwa”?+
18 Asi Mwari angavimbwa naye kuti shoko redu ratakataura kwamuri harisi Hungu asi panguva imwe chete riri Aiwa.
19 Nokuti Mwanakomana waMwari,+ Kristu Jesu, uyo akaparidzwa pakati penyu nesu, kureva ini naSirivhano naTimoti,+ haana kuva Hungu naAiwa, asi Hungu akava Hungu kwaari.+
20 Nokuti zvisinei nokuti zvipikirwa+ zvaMwari zvizhinji sei, izvo zvakava Hungu pachishandiswa iye.+ Naizvozvowo pachishandiswa iye zvinonzi “Ameni”+ kuna Mwari kuti akudzwe nokwatiri.
21 Asi iye anovimbisa kuti imi nesu tiri vaKristu uye iye akatizodza+ ndiMwari.
22 Akaisawo chisimbiso+ chake patiri uye akatipa chokumbofanobata+ chezvichauya, iwo mudzimu,+ uri mumwoyo medu.
23 Zvino ndinodana Mwari kuti apupurire+ mweya wangu kuti handisati ndauya kuKorinde kuti ndimbokuregai.+
24 Kwete kuti tiri vanatenzi+ vokutenda kwenyu, asi tiri vashandi pamwe chete nemi+ kuti mufare, nokuti makamira+ nokutenda+ kwenyu.